नरेन्द्रराज पौडेल - कान्तिपुर समाचार
सम्झनामा त्यो खैरेनीको जाम
दिन घर्किंदै गयो । सबै पक्षहरु थाक्दैपनि गएछन् क्यार ! पोखराबाट आएका यातायात व्यवसायी, मजदूर नेता र प्रशासनको अथक प्रयासपछि अपराह्न चार बजे बल्ल लाश उठाउने र बाटो खोल्ने सहमति भयो । पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालमा लाश पठाएर जाम खुलेपछि बेलुकी दमौली फर्किएँ, लखतरान भएर ।
०५८ साल कार्तिक दोस्रो हप्ताको कुरा । गृह मन्त्रालयको खटनअनुसार आफू कार्यरत विशेष प्रहरी विभागको सहसचिवबाट जनकपुरको सिडिओको लागि सरुवा पूर्जी लिएको थिएँ । दुईचार दिन अघिदेखि धाम्मधुम्म गर्दैआएको मौसम हिंड्ने बेला सिमसिम पानीमा परिनत भइसकेको थियो । लौ राम्रै साइत पर्‍यो भन्ठानेर बाटा लागेको, एयरपोर्टको प्रतीक्षालयमा भित्रिएपछि दुइ चार जना अर्धपरिचित यात्रु भेटिए । गफका साथी त खाली भएनन् तर चीसा कुर्सीमाथिको लामो कुराइले जिउ सिताङ्ग बनायो ।
संस्मरणः राज्यशक्ति निकम्मा भएको त्यो क्षण
महोत्तरीको सिडिओ छँदाको कुरा हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसेको घर झण्डै सय बर्ष पुरानो रहेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निबास रहेको जलेश्वर दरबार पनि संगसंगै जस्तो बनेको थियो भन्थे बुढापाका । त्यही दरबारबाट सिमापारि शुरशण्डका राजाकी छोरीसंग रामशम्शेर जबराको बिहा भएको थियो रे । पछि तिनै रामशम्शेर महोत्तरीको बडाहाकिम भएछन् ।
संस्मरण : बाकस लुटिएको त्यो रात
सिलसिला ०४७ सालको दोस्रो संसदीय निर्वाचनको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायण कुमार श्रेष्ठ प्रमुख निर्वाचन अधिकारी तोकिए । म भने शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, साधन स्रोत जुटाउने, कर्मचारी र परिआउने काम कुराको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ ।
नेपाली राजनीतिमा सभ्य संस्कारको यो खडेरी !
जमीनमाथि पर्ने पानीको खडेरीभन्दा मान्छेभित्रको वानीको खडेरी पक्कै घातक हुन्छ । त्यसमा पनि यति बेर नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुको मन, वचन, कर्म जताततै इमानको खडेरी व्याप्त छ । हुँदाहुँदै त्यो खडेरीले देशका स‌ंबैधानिक निकायहरुसमेत रजनीतिसंगको लसपसले गर्दा बढी नै आक्रान्त बनेका छन् । त्यसैले गीतामा भनिएको होला– संगात् सञ्जायते काम ।
नरेन्द्रराज पौडेलका लेखहरु :
अभिलेखालय (ई. सं.) २०१८२०१७२०१६२०१५२०१४
२०१८ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।